branch opening(branch opening) in Bizshala: Business, economic and financial news of Nepal -
विराटनगरमा महालक्ष्मी बैंकको शाखा
काठमाण्डौ । महालक्ष्मी विकास बैंकले मोरंगको विराटनगरमा नयाँ शाखा स्थापना गरी असार २५ गते सोमबारदेखि संचालनमा ल्याएको छ । विराटनगर महानगरपालिका वडानम्बर २ मा स्थापित यो शाखा बैंकको ७३ औं शाखा हो। यस्तै, बैंकले यही दिन साबिकको महालक्ष्मी विकास बैंकको धादिङ्ग बेशी शाखाको, धादिङ्ग जिल्ला धुनिबेशी नगरपालिका वडा नं ६, धार्केमा...
काठमाण्डौको माछापोखरीमा मुक्तिनाथको शाखा, अन्य ५ ठाउँमा पनि संचालनमा आउँदै
काठमाण्डौ । आधुनिक बैंकिङ्ग, ग्रामीण बैंकिङ्ग र लघुवित्त सेवा एकैसाथ संचालन गर्दै आएको मुक्तिनाथ विकास बैंकले देशैभरी आफ्ना शाखा सञ्जालहरु विस्तार गर्ने क्रममा काठमाण्डौ महानगरपालिका वडा नं.१६, माछापोखरीमा आइतबार आफ्नो शाखा कार्यालय विस्तार गरेको छ । सो शाखा ओशो तपोवनका संंयोजक तथा संस्थापक स्वामीश्री आनन्द अरुण र बैंकका ब्रान्ड...
सेवा बिस्तारमा सेञ्चुरी आक्रामक, एकैसाथ ४ शाखा बिस्तार
काठमाण्डौ । सेञ्चुरी कमर्सियल बैंक लिमीटेडले एकैसाथ ४ ठाउँमा नयाँ शाखा बिस्तार गरेको छ। बैंकले सुनसरीको चतरा र झूम्का, मोरंगको रंगेली तथा झापाको चन्द्रगढीमा नयाँ शाखा स्थापना गरी संचालनमा ल्याएको हो । ती शाखा कार्यालयहरुको छुट्टाछुट्टै समारोहका बीच बैंकको संचालक समितिका अध्यक्ष राजेशकुमार श्रेष्ठले उद्घाटन गरे । उद्घाटन...
सेञ्चुरीको शाखा र एक्सटेन्सन काउण्टर बुढानिलकण्ठमा
काठमाण्डौ । सेञ्चुरी कमर्सियल बैंक लिमिटेडलको बुढानिलकण्ठको मण्डिखटार शाखा कार्यालयको जेठ १० गते बिहीबार औपचारिक उद्घाटन भएको छ । बैंकका अध्यक्ष राजेशकुमार श्रेष्ठले एक कार्यक्रमका बीच शाखा कार्यालयको उद्घाटन गरेका हुन् । साथै सोही दिन बैंकले आफ्नो सेवामा थप गर्दै बुढानिलकण्ठ नगरपालिकाको कपन क्षेत्रभित्र वडा नं १२ को वडा...
सेवा बिस्तारमा जनता बैंक आक्रामक, एकसाथ ५ शाखा संचालनमा
काठमाण्डौ । शाखा बिस्तारको निरन्तरतासँगै जनता बैंक नेपाल लिमीटेडले एकैसाथ थप ५ शाखाबाट कारोबार सुरु गरेको छ । बैंकले सिरहाको गोलबजार नगरपालिका वडानम्बर ४ मा गोलबजार शाखा, रसुवाको नौकुण्ड गाउँपालिका २ मा नौकुण्ड शाखा, रामेछापको दोरम्बा गाउँपालिका वडानम्बर ३ मा दोरम्बा शाखा, जुम्लाको तातोपानी गाउँपालिका गाउँपालिका ३ मा तातोपानी...
एकसाताभित्रै माछापुच्छ्रेको १३ शाखा बिस्तार
काठमाण्डौ । सेवा बिस्तारमा माछापुच्छ्रे बैंक आक्रामक बन्दै गएको छ । बैंकले जेठ महिनामा मात्रै १३ वटा शाखा कार्यालय र २ वटा शाखारहित बैकिङ्ग सेवा संचालनमा ल्याएको हो । जेठ १ गते १० वटा नयाँ शाखा एकसाथ संचालनमा ल्याएको बैंकले जेठ ६ गते थप ३ शाखा र २ शाखा रहित बैकिङ्ग सेवाको सुरुवात गरेको हो । बैंकले सुुनसरीको धरान उप–महानगरपालिका,...
स्थानीय तह र दुर्गममा एनआइसीको बलियो उपस्थिति, ग्राहक संख्या साढे ११ लाख नाघ्यो
काठमाण्डौ । स्थानीय निकायहरुमा समेत बैंकिङ सेवा बिस्तार गर्ने सरकारी नीतिअनुसार हालसम्म सबैभन्दा बढी शाखा एनआइसी एशिया बैंकले स्थापना गरेको देखिएको छ । यो बैंकले सरकार तथा नियामक निकायसँग गरेको प्रतिबद्धता अनुसार दुर्गमका स्थानीय निकायसम्म पनि शाखा सञ्जाल बिस्तार गरी उदाहरणीय काम गरेको हो । कतिपय बैंकहरुले बैकिङ सेवा बिस्तारको...
काठमाण्डौ । माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेडले एकैपटक थप १० शाखा कार्यालयको सुरुवात गरेको छ । खोटाङ्गको हलेसी शाखाको उद्घाटन बैंकका पूर्वअध्यक्ष डा. वीरेन्द्रप्रसाद महतो, बैंकका संचालक राममान श्रेष्ठ र नगरका मेयर इभर राईले संयुक्त रुपमा गरे भने धनुुषाको गणेशमान चारनाथ शाखाको उद्घाटन बैंकका पूर्व अध्यक्ष डा. वीरेन्द्रप्रसाद महतो, बैंकका...
काठमाण्डौ । लक्ष्मी बैंकले आफ्नो शाखा सञ्जाल बिस्तार गर्ने क्रममा सोमबार महोत्तरीको मनरा र रामेछापको खाँडादेवी गाउँपालिकामा नयाँ शाखाहरु संचालनमा ल्याएकोे छ । थपिएका यी शाखाहरुको साथ लक्ष्मी बैंकको शाखा सञ्जाल ८२, ३ हस्पिटल सेवा काउण्टर, १०१ एटिएम, २५०० भन्दा बढी रेमिटेन्स्, ५१ शाखारहित बैंकिङ्ग अनि ४०० भन्दा बढी मोबाईल एजेन्टहरु...
एक क्लिक, ६ वटा शाखाको उद्घाटन !
काठमाण्डौ । डिजिटल दुनियाँमा हरेक काम तथा गतिविधि प्रविधिले सुसज्जित हुँदैछन् । पछिल्लो समय हाम्रो जस्तो मुलुकमा समेत डिजिटल कारोबार प्रविधिकै सहायताका कारण फस्टाउँदैछ । यहीकारण सरकारले लिएको क्यासलेस कारोबारको नीतिलाई सघाउन बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुले डिजिटल कारोबारलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाएका छन् । कारोबार मात्र होइन, केही...
लामो समय सुस्ताएको मेगा बैंक तात्यो, बैशाखभित्रै ११ वटा नयाँ शाखा खोल्ने
काठमाण्डौ । मेगा बैंक नेपाल लिमिटेडले बैशाख महिनाभित्र ११ वटा नयाँ शाखा खोल्ने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति बमोजिम मेगा बैंकले देशका ग्रामीण भेगमा शाखा विस्तार गर्न लागेको हो । यसैक्रममा पाँचथरको कुमायकमा आइतबार र सिन्धुपाल्चोकको इन्द्रावती सोमबार नयाँ शाखा खुलिसकेका छन् । शाखा विस्तार हुन लागेकोमा बर्दियाको...
सेवा बिस्तारमा सिद्धार्थ बैंकको आक्रामक मूभ, एकैदिन ८ शाखाको उद्घाटन
काठमाण्डौ । बैंकिङ्ग पहुँच वृद्धि तथा सेवा बिस्तारको क्रममा सिद्धार्थ बैंकको आक्रामक मूभ देखिएको छ । यो बैंकले बैशाख २३ गते आइतबार देशका विभिन्न क्षेत्रमा ८ वटा नयाँ शाखा एकसाथ संचालनमा ल्याएको हो । रौतहटको माधवनारायण, तनहुँको दुलेगौडा, नवलपुरको गैंडाकोट, नवलपरासीको बर्दघाट, रुपन्देहीको कोटिहवा, कपिलबस्तुको जितपुर, सिराहाको...
सेवा बिस्तारमा प्रभू बैंक आक्रामक बन्दै, एकैदिन २ शाखा संचालनमा
काठमाण्डौ । संघीय संरचनाबमोजिम गठित विभिन्न स्थानीय तहमा रहेका सेवाग्राहीहरुलाई सरल र सहज रुपमा बैंकिङ्ग सेवा पुर्याउने उद्देश्यका साथ बैंकले सिरहा जिल्लाको बरियारपट्टी गाउँपालिकामा १ र कपिलवस्तु जिल्लाको विजयनगर गाउँपालिकामा १ गरी २ वटा शाखा कार्यालय एकैसाथ आइतबारदेखि संचालनमा ल्याएकोछ । सिरहा जिल्लाको बरियारपट्टी...
सेवा बिस्तारमा एनआइबिएल एस क्यापिटल आक्रामकः वीरगञ्ज, बुटवल र विराटनगरमा पनि शाखा
काठमाण्डौ । एनआईबिएल एस क्यापिटल लिमिटेडले एकसाथ वीरगञ्ज, बुटवल र बिराटनगरमा थप ३ नयाँ शाखाहरु बिस्तार गरेको छ । काठमाण्डौ बाहिर ललितपुर र पोखरामा शाखा बिस्तार गर्ने पहिलो मर्चेन्ट बैंकको रुपमा स्थापित यो क्यापिटलले थप शहरमा शाखा बिस्तारमा आक्रामक रणनीति लिएको हो । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेडको पूर्ण स्वामित्व भएको सहायक...
सेवा बिस्तारमा जनता बैंक आक्रामक, एकैसाथ ८ ठाउँमा नयाँ शाखा
काठमाण्डौ । जनता बैंक नेपाल लिमीटेडले शाखा बिस्तारमा आक्रामक रणनीति लिएको छ । यो बैंकले एकैसाथ ८ शाखाको स्थापना गर्दै त्यहाँबाट कारोबारको औपचारिक सुरुवात गरेको हो । चालु आर्थिक बर्षको सुरुदेखि नै शाखा बिस्तारमा निरन्तरता दिएको बैंकले निम्न लिखित ठाउँबाट शाखा स्थापना गरी कारोबारको औपचारिक उद्घाटन गरेको हो: रामपुर शाखा, रामपुर...